सुन्दर हिमाली वस्ती रोल्वालिङमा सम्भव भयो संकटमा राहत « LiveMandu
सुन्दर हिमाली वस्ती रोल्वालिङमा सम्भव भयो संकटमा राहत
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार २३:१७
रोजिता बुद्धाचार्य । कोरोना महामारीको संक्रमण न्यूनिकरण तथा नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको राष्ट्रव्यापी बन्दाबन्दी भएको ७७ औं दिन बितिसक्दा गौरीशंकर गाउँपालिका, दोलखा जिल्लाको विकट रोल्वालिङ गाउँमा भने पहिलोपटक राहत पुगेको छ । क्याब्जे लामा जोपा रिन्पोछे, कपन गुम्बा र रोल्वालिङ सङ्गाग गुम्बा विद्यालयको सहकार्यमा गेशे थुप्तेन जिन्पाको संयोजकत्वमा आइतबार राहत वितरण गरिएको हो ।
त्यस क्षेत्रका सुर्मुचे, दोङगाङ, केल्जे र बेदिङ गरी चार गाउँका कुल ३६ घरलाई प्रति परिवार २५ कि.ग्रा. चामल र ३ लि. तेल वितरण गरिएको स्वयम् सेवकहरु पेम्बा रिता शेर्पा र दावा टासी शेर्पाले जानकारी दिए ।
“हाम्रो बेदिङ गाउँमा अवस्थित रोल्वालिङ सङ्गाग गुम्बा विद्यालयमा मात्र कुल ४० विद्यार्थीहरु छन् । ती विद्यार्थी सबै विपन्न परिवारका हुन् । यहीं छात्रावासको व्यवस्था गरी निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेका छौं । ती विद्यार्थी र गाउँलेको भोक कसले देख्ने ?” विद्यालयका प्रमुख ङवाङ तेन्जी लामाले भन्नुभयो ।
तुलनात्मक रुपमा काठमाडौं निकट भएतापनि यस विकट हिमाली गाउँ पुग्न करिब ३ देखि ४ दिन लाग्छ । हालसम्म गाउँमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै सुविधा छैन । स्वास्थ्य चौकी भवन त छ, तर, आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी, आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री र सुविधा भने छैन ।
“एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा आवातजावत बन्द भएको पनि ७७ दिन भइसक्यो । अहिलेसम्म वडा समिति, गाउँपालिका वा अन्य कुनै सम्बन्धित निकायबाट कोही पनि यहाँ आएका छैनन् । हामी भोकले मर्यौं कि रोगले कसैले चासोसम्म दिएका छैनन् झन् सरकारबाट आउने राहतको त कुरै नगरौं” स्थानिय सगरमाथा आरोही फुर्वा तेन्जिङ शेर्पाले गुनासो पोखे ।
“गाउँमा फल्ने भनेको आलु र मूला मात्र हो । पोहोर सालको बाली खाएर सकिसक्यो । यसपाली भर्खरै आलु लगाउन सक्यौं । गाउँले सबै दुःखसुखले मिलीजुली नबसेका भए कत्ति गाउँले त अस्थिपञ्जर भइसक्थे । सुन्न त रेडियोमा हेलिकप्टरमा राहत आउँछ रे भन्ने सुनेको तर के गर्ने ?” अर्का स्थानिय किन्जुम शेर्पाले भावुक हुँदै सुनाए ।
गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने रोल्वालिङ गाउँ धार्मिक, प्राकृतिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले दोलखा जिल्लाकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थल मानिन्छ । गुरु रिम्पोछे (पद्मसम्भव) ले करिब २००० वर्ष अघि स्थापना गरेको विश्वास गरिने यस क्षेत्र गौरीशंकर हिमाललगायतका ६००० मिटरका सयौं हिमालहरु, त्छो–रोल्पा ताल, दुर्लभ जडिबूटी तथा रेड पान्डा, हिउँ चितुवाजस्ता वन्यजन्तु एवम् सगरमाथा क्षेत्र प्रवेश गर्ने पदमार्ग टासीलाप्चा पासका कारण प्रख्यात रहेता पनि यहाँको जनजीवन निकै कष्टकर देखिन्छ ।
तस्वीर स्रोतः फुर्वा तेन्जिङ शेर्पा तथा Paolo Cocco
#फुर्वा छिरिङ शेर्पा